Mpanamboatra fehin-kibon'ny tanin-tsolika tsara indrindra | Wanhoo
Strap tank-fuel thermoplastic
Ny tady famonoana solika dia fanohanan'ny solika na tanky misy solika amin'ny fiaranao. Matetika dia karazana C na fehikibo karazana U mifatotra manodidina ny tanky. Matetika ny fitaovana dia vy fa mety tsy metaly koa. Ho an'ny fiara mifono solika, tadiny 2 no mazàna ampy, fa ho an'ny tanky lehibe hampiasaina manokana (ohatra tanky fitehirizana ambanin'ny tany) dia betsaka no ilaina.
Inona ny tadin'ny tanky solika?
Ny kibon'ny karbaona dia karazan-tsoavaly avo lenta tsy misy fotony miaraka amin'ny atin'ny karbaona avo kokoa noho ny 90%, izay novaina avy tamin'ny fibre organika tamin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana maromaro. Izy io dia karazana fitaovana vaovao manana toetra mekanika tena tsara. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny gazy karbonika sy ny fahalemem-panahy ary ny fahaizan'ny fizotry ny lamba. Izy io dia taranaka vaovao misy fibre nohamafisina. Ny kibon'ny karbaona dia manana ny mampiavaka ny fitaovan'ny karbaona mahazatra, toy ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana ny fikorontanana, ny fitondra herinaratra, ny fitondra hafanana ary ny fanoherana ny harafesina. Saingy tsy mitovy amin'ny fitaovan'ny karbaona mahazatra, ny endriny dia tena anisotropika, malefaka ary azo zahana ho lamba isan-karazany, mampiseho tanjaka lehibe manaraka ny axe fibre. Ny fibre karbonika dia manana hery misintona voafaritra ambany, noho izany manana tanjaka manokana manokana.
Mampiasa fibre karbaona sy plastika izahay mba hamokarana ny tadin'ny tanky. ataovy maivana sy mahery
Tady fatana CFRT
4 sosona CFRT PP ravina (ravina PP thermoplastic izay manamafy ny fibre);
Votoatin'ny fibre 70%;
1mm matevina (0,25mm × 4 sosona);
Lamination marobe: 0 °, 90 °, 45 °, sns.
Amin'ny fiara mifono lasantsy fiara:
Ny fivezivezena amin'ny fiara dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny fitoeran-tsolika. Noho io antony io dia mila clamp ianao hanamboarana ireo tanky ireo. Izy ireo ihany no mitazona ny fiara mifono vy. Ireo CFRT Fuel Tank Straps ireo dia afaka mitazona ny fitoeran-tsolinao ho voaro hatrany amin'ny toerany na manao ahoana na manao ahoana ny lalana mikitoantoana sy ny haratsian'ny toetr'andro.
Amin'ny fiara fitehirizana ambanin'ny tany:
Vita amin'ny ravina CFRT, ireo clamp ireo dia azo ampiasaina amin'ny tanky fitehirizana ambanin'ny tany mba hampitomboana ny fihazonana azy. Ho fiarovana sy fitoniana an'ireo fiara vaventy ireo dia mila clamp bebe kokoa ao anaty tanky.
Teo aloha: Sela solika hidrogen (sela elektrokimika)
Manaraka: Scaffold board- Thermoplastic